Iindaba-Iingcebiso zokuthenga iimaski ze-PM2.5
Ungazikhetha njani iimaski ze-PM2.5? Iidolophu zanamhlanje zizele ngumsi, kwaye umgangatho womoya uyaxhalabisa. Sixoxa ngokuba iimaski zibhekisa kwiimaski zokhuselo ezilungiselelwe ngokukodwa i-PM2.5, ngelixa iimaski eziqhelekileyo zisetyenziselwa ikakhulu ukugcina ukubanda. Izixhobo zabo kunye nokubalulwa kwazo akukho mfuno zimanyeneyo, kodwa enyanisweni, azinampembelelo kwi-PM2.5 nakuthintelo lwezifo.
Igama lesiTshayina le-PM2.5 lilungile. I-particle efanelekileyo ibhekisela kumasuntswana kunye nobubanzi obulinganayo be-aerodynamic obungaphantsi okanye bulingana no-2.5 ​​microns emoyeni ojikelezayo. Ngenxa yokuba amasuntswana mancinci kakhulu, iimaski eziqhelekileyo ezinje ngeemaski zomqhaphu kunzima ukusebenza. Malunga nokuthenga iimaski ze-PM2.5, kokukhona imigaqo iphakama, kokukhona inqanaba lokhuselo lingcono, kokukhona ukuxhathisa ukuphefumla okuqhelekileyo, kunye nokuthuthuzeleka kokubi xa uzinxibile. Ukuba unxiba imveliso yesi sikhombisi ixesha elide, nokuba kwenzeka ihypoxia eqatha.
Kwaye xa ukuma kwemaski ye-PM2.5 kungalingani ebusweni, izinto eziyingozi ezisemoyeni ziya kungena kwindawo yokuphefumla zingangeni kuyo, nokuba ukhetha imaski eneyona nto ilungileyo yokuhluza. Ayinakukhusela impilo yakho. Ke ngoku imithetho emininzi kunye nemigangatho yamanye amazwe ichaza ukuba abasebenzi mabavavanye rhoqo iimaski ezifanelekileyo, ukuze kuqinisekiswe ukuba abasebenzi bakhetha ubungakanani obufanelekileyo beemaski kwaye banxibe iimaski ngokwamanqanaba afanelekileyo, ke iimaski kufuneka zahlulwe ngobukhulu obahlukeneyo ukujongana nazo. amaqela ahlukeneyo abantu.
Ukongeza, iimaski zekhabhoni ezisebenzayo ziyaziwa ngoku. Olu hlobo lweemaski lunokuthintela ngokufanelekileyo ukuvumba ngenxa yokongezwa kwekhabhoni esebenzayo ngelixa kuthathelwa ingqalelo ukusebenza ngokuthintela uthuli. Xa ukhetha le mveliso, kuya kufuneka ubone ngokucacileyo ukusebenza kwayo ngokuqeshisa uthuli, hayi nje ngokudideka yicarbon.
Kuyacetyiswa ukunxiba isixhobo sokuphefumla se-PM2.5 kunye nevalve yokuphefumla kangangoko kunokwenzeka, ukwenzela ukunciphisa ubushushu obugqithisileyo obubangelwa kukunxiba isixhobo sokuphefumla ixesha elide. Ngelo xesha, ukukhanya kulula ngakumbi.